Imithandazo Yomtshato YamaKristu Yomtshato Wakho Womtshato
Mna wam nomyeni uyavuma ukuba umthandazo womtshato ngowenye yexesha elikhunjulwayo lomtshato wethu, njengoko saguqa phambi kwentsapho kunye nabahlobo kwaye sazinikezela kuThixo kunye nomnye ngonaphakade.
Unokuba unqwenela ukuthetha umtshato njengomtshato, okanye ubuze umphathiswa wakho okanye indwendwe ekhethekileyo ukuthetha lo mthandazo. Nazi iindlela ezintathu zemithandazo yomtshato yobuKristu ekuqwalaseleni ukubandakanya umtshato wakho.
Umthandazo womtshato womtshato
Ndiyabonga ngolu suku oluhle. Ufezekise umnqweno weentliziyo zethu ukuba sibe ndawonye kulobu bomi.
Sithandazela ukuba iintsikelelo zakho zihlale zihlala ekhaya lethu; ukuba uvuyo, uxolo kunye nokwaneliseka kwakuza kuhlala phakathi kwethu njengoko siphila kunye ngokubambisana, kwaye bonke abangena ekhaya bethu bafumana amandla othando lwakho.
Baba, sincede silandele kwaye sikhonze ngokuzinikela okuqhubekayo ngenxa yemanyano yethu. Sikhokele ekuthandeni ngakumbi nangomnikelo njengoko sinyamekela abanye, sifuna ukuba uya kusinceda. Ngamana sihlale siyazi kakuhle ubukho bakho njengoko siyiqonda namhlanje ngosuku lomtshato wethu. Kwaye ukuzinikela kwethu emtshatweni kungabonakalisa ukuthanda kwakho.
Ngegama likaYesu, uMsindisi wethu, sithandaza.
UThixo onomusa kakhulu, sikubulela ngothando lwakho luthando ngokuthumela uYesu Kristu ukuba eze phakathi kwethu, ukuba azalwe ngumama wabantu, kwaye enze indlela yomnqamlezo ibe yindlela yokuphila.
Siyanibulela, kwakhona, ukulungelelanisa umanyano womntu kunye nomfazi egameni lakhe.
Ngamandla kaMoya oyiNgcwele , gcolela ubuninzi beentsikelelo zakho kulo mntu kunye nalo mfazi.
Ukuzikhusela kuzo zonke iintshaba.
Baholele kuzo zonke uxolo .
Mthandane uthando lwabo komnye nomnye, libe sisitywina ezintliziyweni zabo, isambatho ngamagxa abo, kunye nesithsaba emabunzini abo.
Basikelele emsebenzini wabo kunye nobudlelwane babo; ekuphumeni kwabo nasekuvukeni kwabo; ngovuyo lwabo nangentlungu yabo; ebomini babo nasekufeni kwabo.
Ekugqibeleni, ngenceba yakho, ubazise etafileni apho abangcwele bakho banomdla ngonaphakade kwikhaya lakho lasezulwini; ngoYesu Kristu iNkosi yethu, ohlala kunye noMoya oyingcwele , olawulayo, uThixo omnye, ngonaphakade naphakade.
- I-Book of Common Prayer (1979)
Umthandazo Womtshato Umtshato
Sandla ngesandla, siza phambi kwakho, Nkosi.
Sinikela ngesandla, siphumela ekholweni .
Thina, abahlanganiselwe apha, cela ukuba uthathe esi sibini ezandleni zakho. Ncedani, Nkosi, ukuba nihlale niqinile kwiimbopheleleko abazenze.
Baholele, OThixo, njengoko beba yintsapho, njengoko beyitshintsha nganye kwiminyaka. Kwangathi banokuguquguquka njengoko bethembekile.
Yaye Nkosi, sincede sonke sibe zezandla zakho ukuba kukho imfuneko. Qinisekisa, ngesisa zonke izibophelelo zethu, ngoYesu Kristu iNkosi yethu.
I-Belmont Stakes Traditions
Inkcazo kunye neMimiselo yokuxhomekeka kwiNgesi
Iimfuno zokuBhala kweeNcwadi zoShishino loPhando
Amachiza okuPhilisa kunye neZakhiwo zabo zokomoya
I-Biography ka-Norman Foster, uMyili we-High-Tech Architect
Iincwadi ezili-10 zokufunda ngaphambi kokuba zi-Movie